ADOBE CS5 & CS6 ALL PRODUCT ACTIVATOR CRACK+PATCH (24.1 MB) - သန်လျင်သားနည်းပညာ
Home / ADOBE KEY များရှာပါ / ADOBE CS5 & CS6 ALL PRODUCT ACTIVATOR CRACK+PATCH (24.1 MB)
ADOBE CS5 & CS6 ALL PRODUCT ACTIVATOR CRACK+PATCH (24.1 MB)
by သန်လျင်သားနည်းပညာ on 15:23:00 in ADOBE KEY များရှာပါ
မင်္ဂလာပါဒီတစ်ခါတင်ပေးလိုက်တာက ADOBECS5&CS6 ဆော့တွေသုံးနေတဲ့သူငယ်ချင်းတွေအားလုံးအတွက် ဆောင်ထားသင့်တဲ့ ACTIVATOR လုပ်ပေးနိုင်တဲ့ CRACK+PATCH လေးတွေပါ၊ ကျွန်တော်ကိုယ်
တိုင်လဲ အမြဲသုံးနေတဲ့ကောင်လေးပေါ့၊သကယ်လဲ အသုံးဝင်ပါတယ်၊ကျွန်တော်အတွက်တော့မရှိမဖြစ်တဲ့
ဖိုင်လေးတွေပေါ့၊ ကျွန်တော်အရင်ကလဲတင်ပေးခဲ့ဖူးပါတယ်၊ ဒါပေမယ့်လင့်သေနေတာတွေ့လို့ပြန်တင်ပေး
လိုက်တာပါ၊ ADOBE CS5 & CS6 ကို ACTIVATOR ဖြစ်အောင်လုပ်ပေးနိုင်တဲ့ CRACK+PATCH တွေကတော့အကုန်ပါဘဲအောက်မှာအသေးစိတ်ဖက်ပြီးဒေါင်းထားပြီးဆောင်ထားစေချင်ပါတယ်၊ မရှာတက်
Adobe All CS5 & CS6 Product Activator
Adobe All CS5 & CS6 Product Patch
1. Place the patcher into the "Adobe" folder.
a.) If you're usinga32 bit OS, you have to navigate into the "Program Files" folder
b.) If you're usinga64 bit OS, you have to navigate into the "Program Files" folder
program, you have to navigate into the "Program Files (x86)" folder as well to
Tags # ADOBE KEY များရှာပါ
ADOBE KEY များရှာပါ
By သန်လျင်သားနည်းပညာ at 15:23:00
Labels: ADOBE KEY များရှာပါ